विपन्न २२ घरपरिवारलाई निःशुल्क बाख्रा – Chitwan Post
विपन्न २२ घरपरिवारलाई निःशुल्क बाख्रा
गुञ्जनगर । विपन्नहरुलाई आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १८ का २२ जना विपन्नहरुलाई बाख्रा वितरण गरिएको छ ।
दिगो आयआर्जनका लागि बाख्रापालन उत्तम विकल्प हुन सक्ने भन्दै क्लिनिक नेपाल मेघौलीको सहयोगमा २२ घरपरिवारलाई बुधबार गुञ्जनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बाख्रा वितरण गरिएको हो ।
यस्ता खालका कार्यक्रमले आयआर्जनमा थप सहयोग पुग्ने भरतपुर–१८ का वडाध्यक्ष दीपक लामाले बताए । गरिबी निवारण गर्नका लागि वडाका विपन्न एवं दलित परिवारलाई बाख्रा वितरण गरिएको भन्दै वडाध्यक्ष तामाङले बाख्रा वितरण गर्दा अतिविपन्न दलित, जनजाति एवं एकल महिलालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
उनले विपन्नहरुको आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मह¤वपूर्ण भूमिका रहने र आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका आयआर्जनका लागि वडाले सक्दो सहयोग गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि क्लिनिक नेपालका प्रमुख हरि भण्डारीले सानो सहयोग भए पनि यसले आर्थिक उपार्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दलित तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि स्थानीय सरकारहरुले आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
क्लिनिक नेपालबाट बाख्रा पाएसँगै विपन्नहरु उत्साहित भएका र उनीहरुले यसैबाट बाख्रापालनलाई अघि बढाउने उद्देश्य लिएको बताए । ‘हाल एउटा बाख्रा प्राप्त भएको छ’, भरतपुर–१८, शशिनगरकी प्रेमकुमारी महतोले भनिन्, ‘हामीले यसैबाट धेरै बाख्रा बनाएर बाख्रापालनलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।’
वडाबाट बाख्रा पाएपछि खुसी हुँदै गुञ्जनगरकी निर्मला नेपालीले यसले आफ्नो आर्थिकरुपमा सुधार हुने बताइन् । वडाले दिएको बाख्राबाट संख्या वृद्धि गर्दै आगामी दिनमा राम्रो आम्दानी लिने उनले बताइन् ।
एउटा बाख्राबाट धेरै बाख्रा बनाएर यसैलाई आम्दानीको दरिलो माध्यम बनाउने अठोट लिएर काम गर्ने भरतपुर–१८, लाहुरेचोककी राधिका रिजालले बताइन् । अन्यले पनि प्राप्त भएका बाख्रालाई राम्रोसँग पालनपोषण गरेर मनग्य कमाइ गर्ने उद्देश्य लिएको कार्यक्रममा बताए ।
बाख्रा वितरण गर्नुअघि क्लिनिक नेपालले एकदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गरेको थियो । जर्मन चिकित्सकहरु डा. क्लाउस हारपिक, जुर्गेन मन्गी, हेइके फ्रिन्जेल र क्लिनिक नेपालका चिकित्सकहरुको टोलीले शिविरमा १०० जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा निःशुल्क औषधि वितरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जर्मन नागरिक डा. क्लाउस हारपिक, समाजसेवी विष्णु ढकाल, शालिकराम पौडेल, वडा सदस्य ज्योत्सना ढकाल, वडा सचिव रामकृष्ण ढकाल, समाजसेवी दण्डबहादुर भण्डारीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
विकासका लागि सामुदायिक वनसम्बन्धी कानुन संशोधन हुनुपर्छ : मन्त्री नेपाल